လှုံ့ဆော်မှုကိုမြည်းစမ်းဖို့ mesolimbic နှင့် mesocortical dopamine ဂီယာ၏တုန့်ပြန်မှု၏ထုံးတမ်းစဉ်လာ (2014) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်တွင်
လှုံ့ဆော်မှုကိုမြည်းစမ်းဖို့ mesolimbic နှင့် mesocortical dopamine ဂီယာ (2014) ၏တုန့်ပြန်၏လေ့
တပ်ဦး Integrated neuroscience ။ 2014 မတ်လ 4; 8: 21 ။ Doi: 10.3389 / fnint.2014.00021 ။ eCollection 2014 ။
မာရီယာအေ De Lucas1,2,*
အားဖြင့်ခန့်မှန်းခြေအဖြစ်ဝတ္ထု, ထူးခြားတဲ့နှင့်ခန့်မှန်းရခက်အရသာများ၏တင်ပြချက်, ထိုကဲ့သို့သောနျူကလီးယပ် accumbens အဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသော DA terminal ကိုဒေသများ (NAc) shell ကိုနှင့်အဓိကနှင့် medial prefrontal cortex (mPFC) တွင် dopamine (DA) ဂီယာကိုတိုးပွားစေ Vivo အတွက် ကြွက်များတွင် microdialysis လေ့လာမှုများ။ DA တုန့်ပြန်နေတဲ့ကျဆင်းခြင်းအတူတူပင်အရသာတစ်ခုတစ်ခုတည်း Pre-ထိတွေ့ပြီးနောက်လည်းမရှိအဖြစ်ဤသည်အကျိုးသက်ရောက်မှု, သပ္ပါယ်စည်းမျဉ်းခြင်းကိုသည်းခံ။ ဤဖြစ်စဉ်လေ့ NAc shell ကိုမှသော်လည်းမ NAc core နဲ့ mPFC DA ဂီယာမှပိုင်ထိုက်သောအဖြစ်ဖော်ပြထားသည်ချေါ။ ဒီအခြေခံပေါ်မှာ, ကယေဘုယျစိတ်ခွန်အားနိုးလှုံ့ဆော်မှုတန်ဖိုး mPFC DA codes တွေကိုကြောင်းအဆိုပြုထားနှင့်အတူတကွ NAc core ကို DA နှင့်အတူထားပြီး, လှုံ့ဆျောမှု၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအတွက်အခန်းကဏ္ဍနှင့်ပိုမိုကိုက်ညီသည်။ ပြောင်းပြန် NAc shell ကို DA အထူးကျွမ်းတဝင်မရှိသောသို့မဟုတ်ဝတ္ထုအရသာလှုံ့ဆော်မှုနှင့်ဆုလာဘ်များက activated သည်နှင့်၎င်း၏ဇီဝအကျိုးသက်ရောက်မှု (အတူအကြိုးစီးပွားရေးနှိုးဆွမှု၏အာရုံခံဂုဏ်သတ္တိများပေါင်းသင်းအစေခံစေခြင်းငှါ,Bassareo etal ။ , 2002; di Chiara etal ။ , 2004) ။ အထူးသ, ချိုမြိန်သို့မဟုတ်ခါးသောအရသာ intraoral ဖို့ DA တုံ့ပြန်မှုလေ့လေ့မွတ်မပြေနိုင်သော-သွေးဆောင် hedonic တန်ဖိုးမသက်ဆိုင်သောနှင့် DA အပြောင်းအလဲတချို့သို့မဟုတ်လျော့ကျလွှမ်းမိုးမှုသည်မဟုတ်ကြောင်းကိုညွှန်ပြ, အရှင်, hedonic သို့မဟုတ်ဆန္ဒရှိအရသာတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုလျှော့ချရေးနှင့်ဆက်စပ်မပေးပါ။ ဒါက Mini-ပြန်လည်သုံးသပ် (NAc shell ကို DA တုန့်ပြန်၏လေ့၏နှောင့်အယှက်၏တိကျသောအခွအေနဖော်ပြထားတယ်de Lucas etal ။ , 2011; Bimpisidis etal ။ , 2013) ။ အထူးသဖြင့်ကျနော်တို့မော်ဖင်းအကိုက်ထိခိုက်စေ mPFC 6-hydroxy-dopamine Hydrochloride (6-OHDA) ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ခြင်းဖြင့်ချောကလက် (ချိုမြိန်အရသာ) ကို NAc shell ကို DA လေ့တစ်ခုဖျက်သိမ်းလေ့လာသည်။ ထိုမှတပါး, မော်ဖင်းအကိုက်ာင်းအဆိုပါ mPFC အတွက်လေ့၏အသွင်အပြင်နှင့်နုံကြွက်ထဲမှာဘဲ Pre-ထိတွေ့တိရိစ္ဆာန်များအတွက်မြည်းစမ်းဖို့ NAc core ကို DA တစ်ခုတိုးလာနှင့်နှောင့်နှေးတုန့်ပြန်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ဒီမှာရလဒ်များကို mesolimbic နှင့် mesocortical DA ဂီယာ၏လေ့ဖြစ်ရပ်ဆန်း၏ယန္တရားအပေါ်သွန်းလောင်းအလင်းဖော်ပြထားနှင့်ထိုကဲ့သို့သောစွဲအဖြစ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်အခြေအနေများအတွက် cortical ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အမှတ်အသားအဖြစ်က၎င်း၏ putative အခန်းကဏ္ဍ။
keywords: လေ့, dopamine, နျူကလိယ accumbens, medial prefrontal cortex, အရသာလှုံ့ဆော်မှု, microdialysis
အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောနှစ်မျိုးစလုံးကိုမူလတန်းစိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်များ, မကြာခဏ dopamine များ၏လှုပ်ရှားမှုဟာ ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) တွင် (DA) အာရုံခံခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောနျူကလိယ accumbens (NAc) နှင့် medial prefrontal cortex (mPFC) အဖြစ်၎င်းတို့၏ Terminal ကိုပစ်မှတ်ကအုပ်ချုပ်ကြသည် ။ ဤအ terminal ကိုတိုင်းဒေသကြီးများတွင်, DA ထိုကဲ့သို့သောစီးပွားရေးနှိုးဆွမှု valence အဖြစ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်အချက်များပေါ်တွင် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားလှုံ့ဆော်မှု appetitive သို့မဟုတ်ဆန္ဒရှိတုံ့ပြန်မှု, အာရုံခံနည်းလမ်း, တိကျတဲ့ DA အာရုံခံဆဲလျ subpopulations stimulus, ကွဲပြားခြားနားသော terminal ကိုဒေသများသို့လေ့လာခဲ့ပြီးလျှင်, နည်းစနစ် DA ၏ထောက်လှမ်းအတှကျအသုံးပွု (ဥပမာ microdialysis vs voltammetry; Fibiger နှင့် Phillips က, 1988; di Chiara, 1995; Westerink, 1995; Berridge နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 1998; Schultz, 1998; Redgrave et al ။ , 1999; di Chiara et al ။ , 2004; Aragona et al ။ , 2009; Lammel et al ။ , 2012; McCutcheon et al ။ , 2012).
စိတ်ခွန်အားနိုးလှုံ့ဆော်မှု valence နှင့် DA ဂီယာ၏တုန့်ပြန်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအကြားတိုက်ရိုက်ဆက်စပ်ကျယ်ကျယ်များကတန်ဖိုးထားထားပြီး Vivo အတွက် သုံးကွဲပြားခြားနားသော DA terminal ကိုဧရိယာများတွင်ဦးနှောက် microdialysis လေ့လာမှုများ: NAc shell ကို, NAc core ကိုနှင့် mPFC (Bassareo နှင့် Di Chiara, 1999; Bassareo et al ။ , 2002) ။ အထူးသဖြင့်, က (ချိုမြိန်ခြင်းနှင့်ခါးသီး) ကသဘာဝဆုလာဘ် (ဥပမာအလွန်အမင်းအရေးပါတယ်လို့အစားအစာ) နှင့်အဓိကအစားအစာအရသာလှုံ့ဆော်မှုဖို့ထိတွေ့ NAc shell ကိုနှင့်အမာခံအတွက်နှင့်အစားအစာမဟုတ်သော-ဆုံးရှုံးကြွက်၏ mPFC အတွက် DA ဂီယာတိုးပွါးကြောင်း။ လေ့လာတွေ့ရှိထားသည် NAc shell ကိုခုနှစ်တွင်သော်လည်းမ NAc core ကိုဒါမှမဟုတ် mPFC အတွက်, ဒီတုန့်ပြန်အတူတူအရသာ / အစားအစာမှတစ်ခုတည်း Pre-ထိတွေ့ပြီးနောက်သပ္ပါယ်စည်းမျဉ်းခြင်းကိုသည်းခံ။ ဤသည်တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုမှုများထပ်တလဲလဲလှုံ့ဆော်မှုအောက်ပါလျော့နည်းစေခြင်း, လေ့ (ချေါဖြစ်ပါတယ်Thompson နှင့် Spencer, 1966; Cohen ကို et al ။ , 1997; Rankin et al ။ , 2009) ။ NAc shell ကိုခုနှစ်တွင်သဘာဝဆုလာဘ်မှလေ့တိကျတဲ့မြည်းစမ်းဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့် (ထိုတိရစ္ဆာန်များအစားအစာဟာဆင်းရဲချို့တဲ့သဖြင့်ပြောင်းပြန်နှင့်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုနှင့်ဆက်စပ်တွေကိုများ၏တင်ပြချက်အားဖြင့်ပြုပြင်ထားသောဖြစ်ပါတယ်Bassareo နှင့် Di Chiara, 1999) ။ ယင်းတွေ့ရှိချက် NAc shell ကို DA လွတ်လပ်စွာလှုံ့ဆော်မှု valence ၏ယေဘုယျစိတ်ခွန်အားနိုးတနျဖိုးများအတွက် mPFC codes တွေကိုအတွက် DA စဉ်ကျွမ်းတဝင်မရှိသောအစာစားချင်စိတ်အရသာလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် activated ကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင်ဤ (ဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှုအတွက် NAc shell ကို DA နှင့်၎င်း၏လေ့၏အခန်းကဏ္ဍကိုမျဉ်းတားBassareo et al ။ , 2002; di Chiara et al ။ , 2004).
ဆနျ့ကငျြ, DA တုံ့ပြန်မှုလေ့ (ဦးစား NAc core ကိုနှိုင်းယှဉ်ပါက NAc shell ကိုအတွက် DA ဂီယာလှုံ့ဆော်သောအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများဖို့ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှု (ဥပမာနီကိုတင်း, opiates, psychostimulants, cannabinoids) အပြီးပစ္စုပ္ပန်မဟုတ်ပါPontieri et al ။ , 1995,1996; Tanda et al ။ , 1997) ။ သို့သျောလညျး၏, အသုံးပြုခြင်း Vivo အတွက် အခြားအဓာတ်ခွဲခန်းများအားဖြင့် voltammetry (နှစ်ဦးစလုံး cued နှင့်ခြွင်းချက်မရှိအစာစားချင်စိတ်လှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်သို့မဟုတ်ကင်းပြီးနောက် DA အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်ဆန့်ကျင်ဘက်များနှင့်သီးခြားခွဲဒေသဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများပြသAragona et al ။ , 2009; ဘရောင်း et al ။ , 2011; Badrinarayan et al ။ , 2012).
ဤသုံးသပ်ချက်ကိုစိတ်ခွန်အားနိုးလှုံ့ဆော်မှုမှ NAc shell ကို DA တုန့်ပြန်၏လေ့၏နှောင့်အယှက်အဘို့စမ်းသပ်သက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြထားတယ် Vivo အတွက်, ဤသိသာထင်ရှားသောအပြောင်းအလဲများကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သောတိကျသောအခြေအနေများအပေါ်။ ဒီနေရာမှာဆွေးနွေးဒေတာသင်ယူမှုနှင့် hedonic ဖြစ်စဉ်များနှစ်ဦးစလုံးအတွက် DA ၏အခန်းကဏ္ဍကိုမီးမောင်းထိုးပြ။
မော်ဖင်းအကိုက်ထိခိုက်မခံတဲ့လှုံ့ဆော်မှုကိုမြည်းစမ်းဖို့ MESOLIMBIC AND MESOCORTICAL DOPAMINE တုံ့ပြန်မှုလေ့အပေါ်သက်ရောက်မှု
အားဖြင့်ခန့်မှန်းခြေအဖြစ်မော်ဖင်းအကိုက်အုပ်ချုပ်ရေး, အ mesolimbic စနစ် DA ဂီယာတိုးပွါး Vivo အတွက် ဦးနှောက် microdialysis (di Chiara နှင့် Imperato, 1988; Pontieri et al ။ , 1996) ။ မော်ဖင်းအကိုက်ဖို့ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှု၏တိကျသောစမ်းသပ် protocols များာင်းကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဝတ္ထု, ထူးခြားတဲ့နှင့်ခန့်မှန်းရခက်အရသာလှုံ့ဆော်မှုဖို့တစ်ခုတည်းကို pre-ထိတွေ့ခြင်းမှ DA ဂီယာ၏တုန့်ပြန်၏လေ့ပေါ်မော်ဖင်းအကိုက်အကဲဆတ်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်ထားသည် (de Lucas et al ။ , 2011) ။ အမူအကျင့်များနှင့်ထဲကဓာတုပစ်စညျးာင်းသွေးဆောင်နိုင်ရန်အတွက်တစ်ဦး protocol ကိုအားဖြင့်ပဋိသန္ဓေ Cadoni နှင့် Di Chiara (1999) သုံးခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ကြွက်များမော်ဖင်းအကိုက် (10, 20, 40 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ် SC) သို့မဟုတ်ဆားတွေတိုးလာဆေးများနှင့်အတူသုံးရက်ဆက်တိုက်တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။ ဆုတ်ခွာ၏ 15 ရက်ပေါင်းပြီးနောက်ကြွက် NAc shell ကို, core နဲ့ mPFC dialysate DA ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက် microdialysis session တစ်ခုအတွင်းမှာတစ်ဦး intraoral cannula (1 ml /5မိ, io) မှတဆင့်အစာစားချင်စိတ်ချိုမြိန်ချောကလက်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုတိကျတဲ့ငွေပမာဏကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကတွေ့ရှိချက် opiate ထိခိုက်စေချောကလက် Pre-ထိတွေ့ခြင်းဟာ mesocorticolimbic DA စနစ်၏တိကျသော subdivision ပတ်သတ်ပြီးအဖြစ် DA ဂီယာ၏တုံ့ပြန်မှုအပေါ်တစ်ဦး differential ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကွိုးစားအားထုကြောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ဂဏန်း Figure11 နုံနဲ့ချောကလက် pre-ထိတွေ့ကြွက်များတွင်ချိုမြိန်ချောကလက် intraoral မှ NAc shell ကိုနှင့် core နဲ့ mPFC DA အဆင့်ဆင့်၏တုံ့ပြန်မှုအပေါ်မော်ဖင်းအကိုက်အကဲဆတ်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုပြသထားတယ်။ ကျနော်တို့ (ချောကလက်မှ Pre-ထိတွေ့ခြင်းဟာ mPFC နှင့် NAc shell ကိုအတွက် DA ဂီယာအတွက်ဆန့်ကျင်ဘက်အပြောင်းအလဲများကိုထုတ်လုပ်ကြောင်းအစီရင်ခံde Lucas et al ။ , 2011) ။ တကယ်တော့လှုံ့ဆော်မှုကိုမြည်းစမ်းဖို့ mPFC DA တုန့်ပြန်အတွက်လေ့၏မမျှော်လင့်ဘဲအသှငျအပွငျ NAc shell ကိုအတွက်လေ့၏ဆုံးရှုံးမှုဖြင့်လိုက်ပါသွားခဲ့သည်။ ထိုမှတပါး, မော်ဖင်းအကိုက်ာင်း DA ၏ချက်ချင်းတိုး Pre-ထိတွေ့တိရိစ္ဆာန်များအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာနေစဉ်နုံကြွက်များတွင်မြည်းစမ်းဖို့ NAc core ကို DA တစ်ခု (ချောကလက်ပြီးနောက် 50-110 မိ) တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်နှောင့်နှေးတုန့်ပြန်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ အလားတူရလာဒ်များ (အနေနဲ့ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူရယူခဲ့ကြသည်de Lucas et al ။ , 2011) ။ ထိုမှတပါး, မော်ဖင်းအကိုက်ဖို့ပေမယ့်ာင်းအမူအကျင့်အရသာ reactivity ကိုပြောင်းလဲမှုများချို့တဲ့နေကြတယ်, လှုံ့ဆော်မှုကိုမြည်းစမ်းဖို့ mesolimbic နှင့် mesocortical DA တုန့်ပြန်အတွက်ရေရှည်အပြောင်းအလဲများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ အဆုံးစွန်သောသက်သေအထောက်အထားများ (အရသာ-hedonia DA အပေါ်မူတည်ပါဘူးသောယူဆချက်ကို supportBerridge နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 1998), အရှင်သည်ဤဦးနှောက်ဒေသများတွင် DA ဂီယာတို့၏စီးပွါးကို (စိတ်ခွန်အားနိုးမှမအရသာ၏အာရုံခံသို့မဟုတ် hedonic ဂုဏ်သတ္တိများကနေပေါ်ထွန်းနိုင်Bassareo နှင့် Di Chiara, 1999; Bassareo et al ။ , 2002).
မော်ဖင်းအကိုက် sensitized သို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်မှုကြွက်များတွင် NAc shell ကိုနှင့် core နဲ့ mPFC dialysate DA အပေါ်ချောကလက်မှ 24-ဇ Pre-ထိတွေ့မှု (ကို C, 1 ml /5မိ, io) ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ DA extracellular အဆင့်ဆင့်အတွက်ပြောင်းလဲမှု SEM ±ယုတ်ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုအဖြစ်ရလဒ်များညွှန်ပြနေကြသည် ...
အဆိုပါ DA terminal ကိုဒေသအားလုံးတစ်ဦးတိုးလာမက်လုံးပေး arousal နှင့်သင်ယူမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ, သောလေ့ပြောင်းလဲမှုများ (အသွင်အပြင် vs ဆိုလိုသည်မှာဖျက်သိမ်း), ပြသလေ့လာခဲ့သည်။ အထူးသ, ချောကလက်မှ mPFC DA တုန့်ပြန်၏လေ့ဖြင့် DA ၏ Single-ရုံးတင်စစ်ဆေးလေ့ဖျက်သိမ်းခြင်း, တားစီးကနေ NAc shell ကို DA ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဒီအခွအေနေအရ, တစ်ဦးစိတ်ခွန်အားနိုးလှုံ့ဆော်မှုဆီသို့အကြိမ်ကြိမ်ချဉ်းကပ် facilitated ခံရပေလိမ့်မည်။
THE MPFC DOPAMINE သည့်ဂိတ်နေရာတို့ ABLATION လှုံ့ဆော်မှုကိုမြည်းစမ်းဖို့ MESOLIMBIC DOPAMINE တုံ့ပြန်မှုလေ့အပေါ်သက်ရောက်မှု
နဂိုအတိုင်းဦးနှောက်အတွက်, mPFC DA အဓိကကတော့ PFC အထဲမှာအများကြီးကွဲပြားခြားနားသော Sub-ဒေသများ (တစ်ရှုပ်ထွေးအပြန်အလှန်မှတဆင့်ဆုလာဘ်များနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများတွင်ပါဝင်ပတ်သက် subcortical DA ဒေသများ၏လှုပ်ရှားမှုထိန်းညှိMurase et al ။ , 1993; Taber နှင့် Fibiger, 1995; Kennerley နှင့်ဝေါ်လ်တန်, 2011) ။ ထိုသို့သောထိန်းချုပ်မှုပါ (mPFC အတွက် DA receptors အားဖြင့် modulated ဖြစ်ပါတယ်Louilot et al ။ , 1989; Jaskiw et al ။ , 1991; Vezina et al ။ , 1991; Lacroix et al ။ , 2000) ။ mPFC DA လုပ်ဆောင်ချက်များကို (သိမြင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်စေ့စပ်နေကြတယ်Seaman နှင့်ယန်, 2004စိတ်ခံစားမှုများ), စည်းမျဉ်း (လီဗန်, 2004), အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ် (Khan ကနှင့် Muly, 2011ထိုကဲ့သို့သောမော်တာစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, inhibitory တုံ့ပြန်မှုထိန်းချုပ်မှုများနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်အာရုံစိုက်မှုအဖြစ်) နှင့်အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်ချက်များကို (Fibiger နှင့် Phillips က, 1988; Granon et al ။ , 2000; Robbins, 2002).
ကျနော်တို့မကြာသေးမီကနုံနဲ့ချောကလက် pre-ထိတွေ့ကြွက်များတွင်ချောကလက်မှ NAc shell ကိုနှင့် core ကို DA တုန့်ပြန်ပေါ် mPFC 6-OHDA ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ mPFC အတွက် 6-OHDA နှစ်နိုင်ငံတာဟာတစ်ဦး intraoral ပြွန်ခြင်းဖြင့်အုပ်ချုပ်လှုံ့ဆော်မှု gustatory မှ NAc DA ၏တုန့်ပြန်ပြုပြင်မွမ်းမံ။ မှာပြထားတဲ့အတိုင်း ဂဏန်း Figure22ကျနော်တို့ရိုးအဘာသာရပ်များ၏ NAc shell ကိုအတွက်ကိုတွေ့ရှိရပါသည် intraoral ချောကလက်ဖို့ DA တုံ့ပြန်မှုကိုပြောင်းလဲမလေ့လာသည်။ သို့သော် mPFC DA ဆိပ်ကမ်း၏တွေ့ရှိရပါသည်အနေနဲ့အစာစားချင်စိတ်အရသာလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန် NAc core ကိုအတွက် DA တစ်ဦးမွငျ့မားသော, နှောင့်နှေးခြင်း, တာရှညျတိုးကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ချိုမြိန်အရသာမှ NAc shell ကို DA တုံ့ပြန်မှုများထဲမှ-ရုံးတင်စစ်ဆေးလေ့ဖျက်သိမ်းနေချိန်မှာ Pre-ထိတွေ့ဘာသာရပ်များမှာကိုတွေ့ရှိရပါသည်ချောကလက်မှ NAc core ကို DA တုန့်ပြန်မထိခိုက်ခဲ့ပါဘူး။ DA terminal ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ပြီးနောက် hedonic အရသာရမှတ်မဟုတ်သလိုမော်တာလှုပ်ရှားမှုမတခုတခုအပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှု (လေ့လာတွေ့ရှိထားသည်Bimpisidis et al ။ , 2013).
အဆိုပါ mPFC သို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်မှုကြွက်များတွင် 24-OHDA အတွက် NAc shell ကိုနှင့်အဓိက dialysate DA အပေါ်ချောကလက်မှ 1-ဇ Pre-ထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှု (ကို C,5ml /6မိ, io) ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ DA extracellular အဆင့်ဆင့်အတွက်ပြောင်းလဲမှု SEM ±ယုတ်ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုအဖြစ်ရလဒ်များညွှန်ပြနေကြသည် ...
ယင်းတွေ့ရှိချက် subcortical striatal ဒေသများရှိ DA တုန့်ပြန်၏ mPFC DA inhibitory ထိန်းချုပ်မှု Sub-ဒေသလေ့လာ ventral striatum ပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားကြောင်းအကြံပြုပေလိမ့်မည်။ ထို့အပြင် mPFC အတွင်းကွဲပြားခြားနားသော Sub-ဒေသများ (ဥပမာ prelimbic, infralimbic) ကို NAc ၏ကွဲပြားခြားနားသောအခန်းမှကွဲပြားခြားနားသောစီမံချက်များရှိသည်။ ထို့ကြောင့်အများအားဖြင့် infralimbic ဧရိယာအားဖြင့် innervated သော NAc shell ကို, ၌, cortical-subcortical ကြားဆက်ဆံရေး NAc core ကိုအတွက်တစ်ခုဆန့်ကျင်ဘက်ထုံးစံ၌အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
ဤ (discrete လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်အခြေအနေများ NAc shell ကိုနှင့် core ကို DA ၏ကွဲပြားခြားနားသောတုန့်ပြန်နှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည်di Chiara et al ။ , 2004; di Chiara နှင့် Bassareo, 2007; Aragona et al ။ , 2009; Corbit နှင့် Balleine, 2011; Cacciapaglia et al ။ , 2012).
ဒီနေရာမှာဖော်ပြထားတဲ့စမ်းသပ်ရလဒ်တစ်စိတ်တစ်ဒေသအတွက်စိတ်ထိခိုက် PFC ဒဏ်ရာမကြာခဏမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမမှန် (ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှင်းပြအကူအညီဖြစ်စေနိုင်Delmonico et al ။ , 1998) ။ ထို့ကြောင့် PFC လုပ်ဆောင်ချက်များကို၏နှောင့်အယှက် (စိတ်ထိခိုက်အခြေအနေများနှစ်ဦးစလုံးသည်အောက်ပါပုံပေါ်Bechara နှင့်ဗန် Der Linden, 2005) နှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲ၏သမိုင်း (ဗန်တွင်း Oever et al ။ , 2010; စတိန်းနှင့် Volkow, 2011) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ data တွေကိုလည်းထပ်ခါတလဲလဲတစ်စိတ်ခွန်အားနိုးနှိုးဆွဖို့ထိတွေ့မှုနှင့် mPFC DA ဖြင့်၎င်း၏လှုပ်ရှားမှု၏ထိန်းချုပ်မှုဖို့ NAc DA တုန့်ပြန်အကြားဆက်စပ်မှုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤသည်မူးယစ်ဆေးစွဲ၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ဖြစ်ပေါ်ရသော subcortical ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်အလွန်အရေးပါအခန်းကဏ္ဍ, mPFC ကိုရည်ညွှန်းသည်။ အလားတူပဲ, mPFC မူးယစ်ဆေးစွဲ၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ဖြစ်ပေါ်ရသော subcortical ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်အလွန်အရေးပါအခန်းကဏ္ဍ, ပါဝင်သည်။ တခြားလေ့လာမှု (စွဲလမ်းအတွက် mPFC ၏တိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုပြသSchenk et al ။ , 1991; Weissenborn et al ။ , 1997; Bolla et al ။ , 2003), မူးယစ်ဆေးကိုရှာတဏှာနှင့် relapse လူသားများသို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်များအားဖြင့်ဖြစ်စေခေါ်ဆောင်သွားမူးယစ်ဆေးနှင့်ဆက်စပ်သောထားတဲ့ (Kalivas နှင့် Volkow, 2005).
ထူးခြားကျနော်တို့ NAc shell ကိုနှင့် NAc core ကိုအတွက်နှစ်ဦးစလုံးစိတ်ခွန်အားနိုးအရသာလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန် DA ဂီယာအပေါ်ထပ်ခါတလဲလဲမော်ဖင်းအကိုက်ထိတွေ့မှုနှင့်ရွေးချယ် mPFC DA terminal ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအကြားတူညီတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်ဤဆက်စပ်မှု (ကတစ်ခုတည်းမူးယစ်ဆေးထိတွေ့ NAc shell ကိုအတွက်လေ့ပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့ပါဘူးအဖြစ်, အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးပြီးမှသာတာရှညျအုပ်ချုပ်ရေးတည်ရှိဟန်de Lucas et al ။ , 2012) ။ DA လေ့နှင့်အရသာ reactivity ကိုအကြားမည်သည့်ဆက်ဆံရေးထို့အပြင်မရှိခြင်း (Berridge, 2000; Bassareo et al ။ , 2002; de Lucas et al ။ , 2012) အတည်ပြုထားသည်။
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, ဒီအလုပ်အတွက်သရုပ်ဖော်လေ့၏ဖျက်သိမ်းဖို့ဦးဆောင်သည့်တိကျသောအခြေအနေများ mesolimbic နှင့် mesocortical DA ဂီယာ၏လေ့ဖြစ်ရပ်ဆန်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းလင်း။ လေ့ NAc shell ကိုအတွက်များသောအားဖြင့်ပစ္စုပ္ပန်, ဒါပေမဲ့မပေး NAc core ကိုသို့မဟုတ် mPFC ၌၎င်း, က mPFC အတွင်းနဂိုအတိုင်း DA ဂီယာကအုပ်ချုပ်နေပါတယ်။ သို့သော် mPFC အတွက်လေ့၏အသွင်အပြင်အရေးပါ subcortical လုပ်ဆောင်ချက်များကိုတားစီးရန်၎င်း၏စွမ်းရည်အတွက် mPFC ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အမှတ်အသားအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်။ ဤသည်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အရှုံးကနေမသင့်လျော်လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်အလွန်အကျွံလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ပေါ်စေမည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့သေးအရေးကြီး NAc DA လေ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်အကြောင်း, se နှုန်း မူးယစ်ဆေးမှီခိုနှင့်၎င်း၏တာဝန်ယူမှုတစ်ခုအမှတ်အသားအဖြစ်။
ဤလုပ်ငန်းကိုအဆိုပါ Fondazione Banco di Sardegna ထံမှထောက်ပံ့ငွေကထောက်ခံနှင့် RAS LR 7, 2007 အားဖြင့်ခံခဲ့ရသည်။ ရေးသားသူလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏ပြင်ဆင်မှုနှင့်အတူအကူအညီတောင်းမစ္စ Tonka Ivanisevic ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။
Aragona BJ, နေ့ JJ, Roitman MF, Cleaveland NA, Wightman RM, Carelli RM (2009) ။ ကြွက်များတွင် cue-ကင်းအသင်းအဖွဲ့များ၏ဝယ်ယူစဉ်အတွင်း phasic dopamine ဂီယာပုံစံများ၏ Real-time ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဒေသဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience ။ 30 1889–189910.1111/j.1460-9568.2009.07027.x [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Badrinarayan အေ, Wescott လုပ် SA, Vander Weele CM, Saunders BT, Couturier BE, Maren အက်စ်, et al ။ (2012) ။ ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှု differential နျူကလီးယပ်အတွင်း Real-time dopamine ဂီယာဒိုင်းနမစ် modulate core နဲ့ shell ကို accumbens ။ ဂျေ neuroscience ။715779–1579010.1523/JNEUROSCI.3557-12.2012 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Bassareo V. , De Lucas အမ်တစ်ဦးက, Di Chiara G. အ (2002) ။ နျူကလိယအတွက် dopamine အားဖြင့်စိတ်ခွန်အားနိုးလှုံ့ဆော်မှုဂုဏ်သတ္တိများ၏ differential စကားရပ် core နဲ့ prefrontal cortex နှိုင်းယှဉ် shell ကို accumbens ။ ဂျေ neuroscience ။ 22 4709-4719 [PubMed]
Bassareo V ကို, Di Chiara G. အ (1999) ။ mesolimbic dopamine စာစားချင်စိတ်ကိုလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်မှ၎င်း၏စပ်လျဉ်း၏နို့တိုက်ကျွေးရေး-သွေးဆောင် activation ၏ Modulation ။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience ။ 11 4389–439710.1046/j.1460-9568.1999.00843.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Bechara တစ်ဦးက, ဗန် Der Linden အမ် (2005) ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းနှင့်တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးဒဏ်ရာပြီးနောက်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်။ Curr ။ Opin ။ Neurol ။ 18 734–73910.1097/01.wco.0000194141.56429.3c [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Berridge KC (2000) ။ တိရိစ္ဆာန်များနှင့်မွေးကင်းစအတွက် hedonic သက်ရောက်မှုတိုင်းတာခြင်း: အကျိုးသက်ရောက်စေအရသာ reactivity ကိုပုံစံများ microstructure ။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 24 173–19810.1016/S0149-7634(99)00072-X [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Berridge KC, ရော်ဘင်ဆင် TE (1998) ။ hedonic သက်ရောက်မှု, ဆုလာဘ်သင်ယူမှု, ဒါမှမဟုတ်မက်လုံးပေး salience: ဆုလာဘ်အတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကိုကဘာလဲ? ဦးနှောက် Res ။ ဦးနှောက် Res ။ ဗျာ 28 309–36910.1016/S0165-0173(98)00019-8 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Bimpisidis Z. , De Lucas, MA, Pisanu တစ်ဦးက, Di Chiara G. အ (2013) ။ medial prefrontal dopamine ဆိပ်ကမ်း၏တွေ့ရှိရပါသည်လှုံ့ဆော်မှုကိုမြည်းစမ်းဖို့ accumbens shell ကို dopamine တုန့်ပြန်၏လေ့ abolishes ။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience ။ 37 613-62210.1111 / ejn.12068 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Bolla KI, Eldreth DA, လန်ဒန် ED, Kiehl Ka, Mouratidis အမ်, Contoreggi C. , et al ။ (2003) ။ တစ်ဦးဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဝန်ဖျော်ဖြေ abstinent ကင်းချိုးဖောက် Orbitofrontal cortex ကမောက်ကမဖြစ်မှု။ Neuroimage 19 1085–109410.1016/S1053-8119(03)00113-7 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဘရောင်း, HD, McCutcheon je, Cone JJ, Ragozzino ME, Roitman MF (2011) ။ မူလတန်းအစားအစာဆုလာဘ်များနှင့်ဆုလာဘ်-ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်လှုံ့ဆော်မှုအဆိုပါ striatum တစ်လျှောက်လုံး phasic dopamine အချက်ပြ၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများကျလာသော။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience ။ 34 1997–200610.1111/j.1460-9568.2011.07914.x [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Cacciapaglia အက်ဖ်, Saddoris အမတ်, Wightman RM, Carelli RM (2012) ။ နျူကလီးယပ်အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်ဒိုင်းနမစ် Differential core နဲ့ shell ကို sucrose များအတွက်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူများ၏ကွဲပြားရှုထောင့်ကိုခြေရာခံ accumbens ။ Neuropharmacology 62 2050-205610.1016 / j.neuropharm.2011.12.027 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Cadoni ကို C, Di Chiara G. အ (1999) ။ နျူကလီးယပ်အတွက် dopamine တုန့်ပြန်အတွက်အပြန်အလှန်အပြောင်းအလဲများမော်ဖင်းအကိုက်ဖို့ sensitized ကြွက်များတွင် shell ကိုနှင့်အဓိကနှင့် dorsal caudate-putamen အတွက် accumbens ။ neuroscience 90 447–45510.1016/S0306-4522(98)00466-7 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Cohen ကို TE, Kaplan SW, Kandel ER, Hawkins က RD (1997) ။ အပြုအမူမှဆယ်လူလာဖြစ်ရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်းများအတွက်ရိုးရှင်းသောပြင်ဆင်မှု: လေ့မှပံ့ပိုးယန္တရားများ, dishabituation, နှင့် Aplysia Gill-ဆုတ်ခွာတုံ့ပြန်မှု၏ာင်း။ ဂျေ neuroscience ။ 17 2886-2899 [PubMed]
Corbit LH, Balleine BW (2011) ။ Pavlovian-ဆာလွှဲပြောင်း၏အထွေထွေနှင့်ရလဒ်ကို-တိကျတဲ့ပုံစံများ differential နျူကလီးယပ် core နဲ့ shell ကို accumbens ကကမကထပြုခဲ့ကြသည်။ ဂျေ neuroscience ။ 31 11786–1179410.1523/JNEUROSCI.2711-11.2011 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Delmonico RL, Hanley-Peterson P. , အင်္ဂလန်ဂျေ (1998) ။ စိတ်ထိခိုက်ဦးနှောက်ဒဏ်ရာနှင့်အတူလူပုဂ္ဂိုလ်များအဘို့အ Group မှ psychotherapy: စိတ်ပျက်ခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုစီမံခန့်ခွဲမှု။ ဂျေဌာနမှူးစိတ်ဒဏ်ရာ Rehabil ။ 13 10–2210.1097/00001199-199812000-00004 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
de Lucas, MA, Bimpisidis Z. , Bassareo V ကို, Di Chiara G. အ (2011) ။ အစာစားချင်စိတ်မှ mesolimbic နှင့် mesocortical dopamine ဂီယာနှင့်ဆန္ဒရှိ gustatory လှုံ့ဆော်မှုများ၏တုန့်ပြန်ပေါ်မော်ဖင်းအကိုက်အကဲဆတ်ခြင်းသြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ Psychopharmacology 216 345–35310.1007/s00213-011-2220-9 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
de Lucas, MA, Solinas အမ်, Bimpisidis Z. , Goldberg ကအက်စ် R ကို, Di Chiara G. အ (2012) ။ အမူအကျင့်များနှင့်ထဲကဓာတုပစ်စညျး hedonic အရသာတုံ့ပြန်မှု၏ Cannabinoid ပံ့ပိုးကူညီ။ Neuropharmacology 63 161-16810.1016 / j.neuropharm.2011.10.018 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
di Chiara G. အ (1995) ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကိုလှုံ့ဆျောမှုအတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍ၏ရှုထောင့်ကနေရှုမြင်ကြသည်။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 38 15510.1016/0376-8716(95)01164-T [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
di Chiara G. အ, Bassareo V. (2007) ။ ဆုလာဘ်စနစ်နှင့်ဦးနှောက်: အဘယျသို့ dopamine မပြုမထားဘူး။ Curr ။ Opin ။ Pharmacol ။769-7610.1016 / j.coph.2006.11.003 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al di Chiara G. အ, Bassareo V. , Fenu အက်စ်, De Lucas, MA, Spina L. , Cadoni C. ။ (2004) ။ Dopamine နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲ: အနျူကလိယ shell ကိုကွန်နက်ရှင် accumbens ။ Neuropharmacology 47 227-24110.1016 / j.neuropharm.2004.06.032 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
di Chiara G. အ, Imperato အေ (1988) ။ လူသားမြားသဖွငျ့စော်ကားမူးယစ်ဆေးဝါးဦးစားလွတ်လပ်စွာကြွက်ရွေ့လျား၏ mesolimbic စနစ် Synaptic dopamine ပြင်းအားတိုးမြှင့်။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 85 5274-527810.1073 / pnas.85.14.5274 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Fibiger HC, Phillips က AG က (1988) ။ Mesocorticolimbic dopamine စနစ်များနှင့်ဆုလာဘ်။ အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ 537 206–21510.1111/j.1749-6632.1988.tb42107.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
စတိန်း RZ, Volkow ND (2011) ။ စွဲလမ်းအတွက် prefrontal cortex ၏ကမောက်ကမဖြစ်မှု: တွေ့ရှိချက်များနှင့်လက်တွေ့သက်ရောက်မှု neuroimaging ။ နတ်။ ဗျာ neuroscience ။ 12 652-66910.1038 / nrn3119 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Granon အက်စ်, Passetti အက်ဖ်, သောမတ်စ် KL, Dalley JW, Everitt BJ, Robbins TW (2000) ။ ကြွက် prefrontal cortex သို့ D1 dopaminergic အဲဒီ receptor အေးဂျင့်များ၏ပြုတ်ရည်ပြီးနောက်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုစွမ်းဆောင်ရည် Enhanced နှင့်ချို့ယွင်း။ ဂျေ neuroscience ။ 20 1208-1215 [PubMed]
Jaskiw GE, Weinberger DR, Crawley ဖြစ်မှု (1991) ။ ကြွက်များ၏ prefrontal cortex သို့ apomorphine ၏ Microinjection အဆိုပါ caudate နျူကလိယကနေ microdialysate အတွက် dopamine metabolite ပြင်းအားလျော့နည်းစေသည်။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 29 703–70610.1016/0006-3223(91)90144-B [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kalivas PW, Volkow ND (2005) ။ စွဲလမ်းမှု၏အာရုံကြောအခြေခံ: လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုရောဂါဗေဒ။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု 162 1403-141310.1176 / appi.ajp.162.8.1403 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kennerley SW, ဝေါ်လ်တန် ME (2011) ။ တိုကျရိုကျ cortex အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနှင့်ဆုလာဘ်: neurophysiological နှင့် neuropsychological လေ့လာမှုများအနေဖြင့်ဖြည့်စွတ်သက်သေအထောက်အထား။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 125 297-31710.1037 / a0023575 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Khan က zu, Muly EC (2011) ။ အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်၏မော်လီကျူးယန္တရားများ။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ 219 329-34110.1016 / j.bbr.2010.12.039 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lacroix L. , Broersen LM, Feldon ဂျေ, Weiner ဗြဲ (2000) ။ ငုပ်လျှိုးနေတားစီး, prepulse တားစီးနှင့်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်ကြွက်များ၏ medial prefrontal cortex သို့ dopaminergic မူးယစ်ဆေးဒေသခံတာဟာ၏ဆိုးကျိုးများ။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ 107 111–12110.1016/S0166-4328(99)00118-7 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lammel အက်စ်, Lim ကကယ်, et al C. , Huang က KW, Betley MJ, Tye KM, ပွေးလေ၏။ (2012) ။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ၌ဆုလာဘ်များနှင့်ခြင်းကိုမနှစ်သက်၏ input-တိကျတဲ့ထိန်းချုပ်မှု။ သဘာဝ 491 212-21710.1038 / nature11527 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Louilot အေ, Le Moal အမ်ရှိမုန်အိပ်ချ် (1989) ။ အဆိုပါ prefrontal cortex သို့မဟုတ်နျူကလိယ accumbens အတွက် dopaminergic ဂီယာအပေါ် septum မှ dopaminergic လမ်းကြောင်း၏ဆန့်ကျင်ဘက်လွှမ်းမိုးမှု။ တစ်ဦး Vivo အတွက် voltammetric လေ့လာမှု။ neuroscience 29 45–5610.1016/0306-4522(89)90331-X [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
McCutcheon je, Ebner SR, Loriaux AL, Roitman MF (2012) ။ dopamine နှင့်နျူကလိယ accumbens အားဖြင့်ခြင်းကိုမနှစ်သက်၏ encoding ။ တပ်ဦး။ neuroscience ။ 6: 137 10.3389 / fnins.2012.00137 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Murase အက်စ်, Grenhoff ဂျေ, Chouvet G. အ, Gonon GG, Svensson TH (1993) ။ Prefrontal cortex ကြွက် mesolimbic dopamine အာရုံခံလေ့လာမှုများအတွက်ကွဲပစ်ခတ်ရန်နှင့် transmitter ကိုလွှတ်ပေးရန်ထိန်းညှိ Vivo အတွက်. neuroscience ။ လက်တ။ 157 53–5610.1016/0304-3940(93)90641-W [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Pontieri FE, Tanda, G, Di Chiara G. အ (1995) ။ သွေးကြောသွင်းကင်း, မော်ဖင်းအကိုက်နှင့်စိတ်ကြွဆေးဦးစားသည့်ကြွက်နျူကလိယ accumbens ၏ "အဓိက" နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပါကအား "shell ကို" တွင် extracellular dopamine တိုးမြှင့်။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 92 12304-1230810.1073 / pnas.92.26.12304 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Pontieri FE, Tanda G. အ, Orzi က F, Di Chiara G. အ (1996) ။ နျူကလီးယပ် accumbens နှင့်စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးသူတို့အားတူညီမှုအပေါ်နီကိုတင်း၏ဆိုးကျိုးများ။ သဘာဝ 382 255–25710.1038/382255a0 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Rankin CH အာဗြံတီ, Barry RJ, Bhatnagar အက်စ်, Clayton DF, ကိုလံဘိုဂျေ (2009) ။ လေ့ revisited: လေ့၏အမူအကျင့်လက္ခဏာများတစ်ခု updated နှင့်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောဖော်ပြချက်။ Neurobiol ။ လေ့လာပါ။ Mem ကို။ 92 135-13810.1016 / j.nlm.2008.09.012 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Redgrave P. , Prescott တီဂျေ, Gurney K. (1999) ။ ရေတို-အောင်းနေချိန် dopamine တုံ့ပြန်မှုဆုလာဘ်အမှားအချက်ပြဟာသိပ်တိုတောင်းပါတယ်လား? ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 22 146–15110.1016/S0166-2236(98)01373-3 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Robbins TW (2002) ။ အဆိုပါ 5-ရွေးချယ်မှုအမှတ်စဉ်တုံ့ပြန်မှုအချိန်တာဝန်: အပြုအမူဆေးဝါးဗေဒနှင့် functional neurochemistry ။ Psychopharmacology 163 362–38010.1007/s00213-002-1154-7 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Schenk အက်စ်, Horger BA, Peltier R. , Shelton K. (1991) ။ ကြွက်များတွင် medial prefrontal cortex မှ 6-hydroxydopamine ကိုတွေ့ရှိရပါသည်အောက်ပါကင်း၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှုမှ Supersensitivity ။ ဦးနှောက် Res ။ 543 227–23510.1016/0006-8993(91)90032-Q [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Schultz ဒဗလျူ (1998) ။ dopamine အာရုံခံ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဆုလာဘ် signal ကို။ ဂျေ Neurophysiol ။ 80 1-27 [PubMed]
Seaman JK, ယန် CR (2004) ။ အဆိုပါ prefrontal cortex အတွက် dopamine မော်ဂျူ၏ကျောင်းအုပ်ကြီး features နဲ့ယန္တရားများ။ prog ။ Neurobiol ။ 74 1-5810.1016 / j.pneurobio.2004.05.006 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Sullivan က RM (2004) ။ ကြွက် prefrontal cortex နဲ့ mesocortical dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက် hemisphere asymmetry ။ စိတ်ဖိစီးမှု7131-14310.1080 / 102538900410001679310 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Taber MT, Fibiger HC (1995) ။ အဆိုပါ prefrontal cortex ၏လျှပ်စစ်ဆွကြွက်၏နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်တိုးပွါး: metabotropic အချိုမှု receptors ခြင်းဖြင့်မော်ဂျူ။ ဂျေ neuroscience ။ 15 3896-3904 [PubMed]
Tanda G. အ, Pontieri အက်ဖ်အီး, Di Chiara G. အ (1997) ။ ဘုံμ1 opioid အဲဒီ receptor ယန္တရားအားဖြင့် mesolimbic dopamine ဂီယာ၏ Cannabinoid နှင့်ဘိန်းဖြူကို Activation ။ သိပ္ပံ 276 2048-205010.1126 / science.276.5321.2048 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Thompson က RF, Spencer WA (1966) ။ လေ့: အပြုအမူ၏အာရုံခံအလွှာ၏လေ့လာမှုတစ်ခုမော်ဒယ်ဖြစ်ရပ်ဆန်း။ Psychol ။ ဗျာ 73 16-4310.1037 / h0022681 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဗန်တွင်း Oever MC, Spijker အက်စ်, Smit အေ B, De Vries တီဂျေ (2010) ။ မူးယစ်ဆေးရှာခြင်းနှင့် relapse အတွက် Prefrontal cortex plasticity ယန္တရားများ။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 35 276-28410.1016 / j.neubiorev.2009.11.016 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Vezina P. , Blanc G. အ, Glowinski ဂျေ, Tassin JP (1991) ။ အဆိုပါ cortical D-1 dopamine receptors များအတွက်အခန်းကဏ္ဍ: prefrontocortical နှင့် subcortical ဒေသများရှိတိုးလာ dopamine ဂီယာ၏အမူအကျင့်လက်ငင်းဆန့်ကျင်။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience ။ 10 1001–100710.1111/j.1460-9568.1991.tb00036.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Weissenborn R. , Robbins TW, Everitt BJ (1997) ။ fixed-အချိုးအစားနှင့်ကြွက်များအတွက်အားဖြည့်ဒုတိယအမိန့်အချိန်ဇယားအောက်တွင်ကင်းများအတွက်တုံ့ပြန်အပေါ် medial prefrontal သို့မဟုတ် anterior cingulate cortex ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 134 242-25710.1007 / s002130050447 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Westerink BH (1995) ။ ဦးနှောက် microdialysis နှင့်တိရစ္ဆာန်အမူအကျင့်များလေ့လာမှု၎င်း၏လျှောက်လွှာ။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ 70 103–124 10.1016/0166-4328(95)80001-8 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]